Exclusive: TJ Perkins pakuenda kwake kubva kuWWE, Vince McMahon, kushungurudzika, uye anomiririra Philippines. - Wwe
Exclusive: TJ Perkins pakuenda kwake kubva kuWWE, Vince McMahon, kushungurudzika, uye anomiririra Philippines.
Kumwe kuburitswa kunoshamisa kubva kuWWE gore rino pasina mubvunzo kwaimbova WWE Cruiserweight Champion TJ Perkins.
Makore mashoma apfuura, TJP yakavhundutsa iyo WWE Universe paakakunda WWE yekutanga Cruiserweight Classic, uye aimbove TNA X-Division Champion aizoenderera achishandisa akawanda maitiro kune hunhu hwake, zvinoita kunge achange ari musimboti weWWE's 205 Live brand .
Kusunungurwa kwake, zvakadaro, kwaizouya sechishamiso chikuru kune wese munhu - asi TJP yakazadza karenda yake uye iri kutsvaga kuita masaisai kumaindies.
kana murume akatarisa mukadzi zvakanyanya
Takabata murume iyeye.
Mhoroi, TJ. Ndatenda nekutaura neni. Ngatidzokerei kuCruiserweight Classic. Pamberi pemutambo uyu, iwe wainyanyo kuzivikanwa nekuda kwenguva yako muImpact Wrestling kwawakarwa pasi pemask.
zvekuita kana iwe uchivenga shamwari dzako
Ndezvipi zvakasiyana kuita izvozvo kwenguva yakareba wobva waita semunhu akasiyana zvachose usina izvozvo?
Zvakanaka kwave paine hwakawanda hwehunhu shanduko kwandiri pamusoro pemakore makumi maviri apfuura. Ndisati ndambozviuraya muTNA ini ndaizivikanwa nekuve PUMA muNew Japan Pro Wrestling uye neniwo ndisina mask mune ese New Japan neCMLL pamwe neROH. Zvakare Sodistiko muLucha Libre USA, uye Cobra 2 muNew Japan nzira kumashure muna 2003.
TJP yakabira mask aGran Metalik - asi akapfeka mashoma.
Zvese mune zvese, ini ndakave neanenge gumi akasiyana masiki mavara. Ndinofarira kutamba mavara. Mumwe nemumwe wavo anga akasiyana uye zviri pachena kuti ini ndakasiyana zvishoma. Neimwe nzira, ndinonzwa ndakasununguka seni nekuti ndinogona kuve chidiki cheumwe neumwe panguva imwe chete.
Ehe, iwe wakakunda iyo Cruiserweight Classic. Chii chakange chiri chiitiko ichocho, uye zvaive sei kuwana kumiririra Philippines zvinobudirira kudaro?
Pakutanga ini ndaingobhadhariswa seye Los Angeles mutsimba neAmerican mureza. Ini ndakakumbira kunomiririra Philippines uye Hunter [Triple H] akati kwaive kwakanaka. Kwenguva yekutanga, ndakakwanisa kuzviita. Yaive hombe kwandiri nekuti ini ndanga ndiri nyaya yezvisarudzo zvisina musoro zvekufungidzira kana kufungira zvisizvo kana zvasvika pakuva weAsia. Ndave nzvimbo dzandakaudzwa nzira chete yandaigona kuwana kondirakiti ndeyekuti kana ndikataura chiSpanish ndikaratidzwa seMexico.
Dr dre ex mukadzi michelle net yakakosha
TJP inofanira kumiririra Philippines muWWE
Ndakatumidzwa kunzi muJapan kana muMexico kana kuCanada pasi pemask. Pandakabvunza nezvekumiririra tsika yangu pachena, ndaigara ndichirambwa nekuti zvaionekwa sezvisingakoshi nemakambani mazhinji andaishandira kare. Uye pamusoro peizvozvo, Asia yakanangana nekusarurana ichiri kushivirirwa zvakashata mune ingangoita dzimba dzese dzekukiya. Hapana anozvivhara.
Saka kekutanga, kugona kuve ini uye nekumiririra pachena vanhu vangu uye kuenda munzira yese uye kuhwina zita rakakura mune yakadaro fashoni yaive chinhu chikuru kwandiri. Nekuti izvozvi, nekusingaperi, pane yakakosha nguva muWWE nhoroondo inosanganiswa nePhilippines. Ndinovimba vanhu vazhinji vachatevera uye vayambuke zambuko rangu vozvivakira zvimwe uye nevamwe kuti vamiririre maSouth Asia maAsia.
aj masitaera vs shinsuke nakamura
ZVINOTEVERA: TJP pakuenda kwake kubva kuWWE
KUUYA UP: TJP inovhura pamusoro pemari yaanowana izvozvi zvichienzaniswa neWWE
nhetembo dzeupenyu nanyanduri vakakurumbira
vanhu vanoitei kana vavhunduka
anongoda ini bonde here
ndinoda kugara pamba nguva dzose
kushamisika kwakanaka kwekuitira musikana wako
kuva wega mushure mekurambana